Thu, Oct 17, 2019 at 12:54pm
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहलाई ६ लाखदेखि १ करोडसम्म बजेट दिइएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर दुई अर्ब ३७ करोड वितरण गरिएको छ । स्थानीय तहको गरिब घरधुरी संख्या (६०% भार), जनसंख्या (२०% भार) र दुर्गमता (२०% भार)का आधारमा रकम दिइने ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६’ मा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले पाएको रकममध्ये आयोजनाको कुल लागतको कम्तीमा ७०% श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । त्यस्तै, निर्माण सामग्री खरिदका लागि २५% अर्थात् ५९ करोड, औजारमा ३% अर्थात् सात करोड र कन्टिन्जेन्सी खर्च गर्न १% अर्थात् दुई करोड ३७ लाख छुट्याइएको छ । बाँकी १% अर्थात् दुई करोड ३७ लाख रकम आयोजना व्यवस्थापन र सुपरभाइजरको तलबमा खर्च हुने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री आयोजनाको प्राविधिक अध्ययनको आधारमा स्थानीय तहले खरिद गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । औजारहरू पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै खरिद गरेर श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, कुनै पनि स्थानीय तहले आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन नै गरेका छैनन् । जथाभावी बेल्चा, हेल्मेट, ज्याकेट, बुट, पञ्जालगायतका सामग्री वितरण गरेका छन् । स्थानीय तहले आर्थिक प्रशासन नियमावलीको परिधिभित्र रहेर रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा ‘आयोजना छनोट गर्दा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका आयोजनाहरूको सूचीबाट छनोट गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । त्यसो हुन नसके वडाले सिफारिस गरेका आयोजनामा काम हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहहरूले यी मापदण्डको बेवास्ता गर्दै जथाभावी काम गरेका छन् । त्यस्तै, कार्यविधिमा रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्राविधिक कर्मचारी खटाई आयोजनाको प्राविधिक (डिजाइन, स्टिमेट) प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो प्रतिवेदनका आधारमा अनुसूची १ बमोजिमको लागत अनुमान फारामसमेत भरी गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । तर, यी कुनै पनि काम भएका छैनन् ।
श्रमिकलाई नगदमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । एकातिर सरकारले सबै नेपालीको बैंक खाता अनिवार्य रूपमा खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, अर्कातिर यो कार्यक्रमबापतको ज्याला नगदै वितरण गर्ने कार्यविधि बनाएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष नै सबै श्रमिकको ज्याला बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकै पहलमा यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । तर, आफ्नै मन्त्रालयअन्तर्गतको अर्को कार्यक्रममा भने ज्याला नगदै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि छ ।
महोत्तरीका स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छैन । तथ्यांक संकलनको काम सकिएको उनीहरूको भनाइ छ । मनरा सिस्वा नगरपालिकाका मेयर सञ्जय सिंहले २४ सय बेरोजगारको आवेदन परेको बताए । ‘अधिकांश मास्टर्स गरेका युवा छन्, उनीहरूलाई कुलो खन्ने काममा लगाउन असहज लागिरहेको छ,’ उनले भने ।
जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये रिब्दिकोट र रम्भा गाउँपालिकाले मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । बगनासकाली गाउँपालिकाले तयारीसमेत गरेको छैन । रोजगार संयोजक कामना पराजुली व्यक्तिगत कामले कार्यालय नआएपछि काम अगाडि बढ्न नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण बस्यालले बताए । ‘हाम्रो गाउँमा बाँदर धेरै छन्, किसानलाई हैरान पारेका छन्, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आएको रकमले बाँदर लखेट्ने काम गराउने योजना छ,’ उनले भने । माथागढी गाउँपालिकाले वडैपिच्छे दुई–दुई लाख बाँडे पनि हालसम्म वडा नं. ८ ले मात्रै काम सुरु गरेको छ । तिनाउ गाउँपालिकाले बाँडेको बजेटअनुसार कार्यक्रम सुरु भए–नभएको जानकारीसमेत लिएको छैन । ‘रकम दिएको हो, वडाध्यक्षहरूले के गरेका छन् बुझ्नुपर्छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती भन्छन्, ‘दालचिनी र अम्रिसो रोप्ने भन्ने निर्णय भएको थियो ।’
पाँचथरका आठ स्थानीय तहमध्ये सातवटामा सञ्चालन हुन लागेको कार्यक्रममा एक करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी भइरहेको छ । दक्षिणी पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले यो वर्ष कार्यक्रम नगर्ने भएको छ । हतारमा कार्यक्रम गर्दा गुणस्तरीय नहुने भन्दै कार्यक्रम नगर्ने निर्णयमा पुगेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरुण राईले बताए । दीर्घकालीन योजनामा भन्दा साना–साना योजनामा पैसा बाँडेर बिल मिलाउने तवरमा काम भइरहेको छ । करिब १५ दिनमा काम गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बजेट समयमा नपठाउँदा योजना छनोटमा ढिलाइ भएको छ । छानिएकामध्ये ९५ प्रतिशत योजना सडक निर्माणका छन् ।
सुनसरीका अधिकांश स्थानीय तहमा रोजगार कार्यक्रमका संयोजकहरू पुगेका छैनन् । केही स्थानीय तहले बेरोजगारको लगत वडाबाट संकलन सुरु गरे पनि रोजगार संयोजक नहुँदा काम अघि बढेको छैन । धरान उपमहानगरपालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिकामा हालसम्म रोजगार संयोजक नआएको धरानका प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए । ‘बजेट खर्च गर्ने सबै अधिकार रोजगार संयोजकलाई दिइएको छ । हालसम्म पठाएको छैन । सरकारले हामी आफैँ नियुक्ति गर्छौँ भन्दा पनि दिएको छैन,’ उनले भने ।
७ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ?
यस्तो छ नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने एडिबीको पञ्चवर्षीय रणनीति
नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार भइरहेको छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल
जागीरकाे खाेजीमा हुनुहुन्छ ? यी हुन् बिर्सनै नहुने १२ कुरा
‘ट्राउट रेन्बो’ माछाबाट मालामाल, ५० लाखसम्म आम्दानी !
बिहीबार सुनको मूल्य ११ सयले बढ्यो, कति पुग्यो तोलाको ?
स्याउ भन्दा महंगाे भयाे प्याज, कति पुग्याे किलाेकाे ?
ह्वातै घट्याे सुनकाे मूल्य, कति छ आज ?
निरन्तर घट्दै सुनकाे मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ काराेबार ?
भारत सरकारले किन लगायो प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध ?
एकदिनमै प्रतिकिलाे ३० रूपैयाँले बढ्याे प्याजकाे मूल्य
चाडबाड लागेपछि तरकारीको मूल्य आकासियो, सबैभन्दा महङ्गो रायोको साग
दशैं नजिकिएसँगै ह्वात्तै घट्याे सुनको भाउ, कति पुग्याे ताेलाकाे ?
जे छोयो त्यही महँगो: चामल, हरियो तरकारी, खाने तेल, मासु, लत्ताकपडा र जुत्तासमेत छोइनसक्नु